St. Kitts na-ebupụta asọmpi foto RetieTheKnot
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » St. Kitts na-ebupụta asọmpi foto RetieTheKnot
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A ga-ekerịta foto ikpeazụ nke 5 na weebụsaịtị ma ndị ọha na eze tụọ ya
St. Kitts na-akpọ di na nwunye na United States ka ha nyefee foto agbamakwụkwọ kachasị amasị ha
Asọmpi a ghere oghe nye ndị bi na US, gụnyere DC ndị dị afọ 18 ma ọ bụ karịa ma bụrụ di na nwunye ugbu a
Onye mmeri nke asọmpi ahụ ga-enweta njem maka 2 na St. Kitts
St. Kitts na-ebido asọmpi foto #RetieTheKnot na-akpọ di na nwunye oku na United States, ka ha nyefee foto agbamakwụkwọ ha kachasị amasị ha maka ohere iji merie njem maka 2 n'àgwàetiti St. Kitts na ịnọ na Park Hyatt.
Site na March 14, 2021, onye ọ bụla chọrọ ịbanye asọmpi kwesịrị ịhọrọ foto agbamakwụkwọ kachasị amasị ha ma nyefee ya site na peeji ntinye ntinye a chọtara na weebụsaịtị St. Kitts Tourism Authority yana nkọwa okwu 75 nke na-akọ akụkọ n'azụ oyiyi. Ná ngwụsị nke oge ntinye, otu ndị ọka ikpe ga-ahọrọ ndị ikpeazụ 5. A ga-ekerịta foto ikpeazụ nke 5 na weebụsaịtị ma ndị ọha na eze tụọ ya. Oge ịtụ vootu ga-amalite na Machị 17th site na March 31st na onye mmeri ga-ekwupụta site na Eprel 30, 2021.
Racquel Brown, onye isi oche nke St. Kitts Tourism Authority kwuru, sị, "Obi dị anyị ụtọ na anyị na ndị Dreamy Weddings Group ga-emekọ ihe ọnụ maka mbido ọhụụ ọhụụ na St. Kitts." “Ihe ka ọtụtụ ná ndị di na nwunye, echetụla echiche imezi nkwa ha, n'ihi gịnị? Ma ị lụrụ di na nwunye otu afọ, afọ ise, afọ iri abụọ na ise ma ọ bụ karịa, na-esonye na mmeghari ohuru nke mbụ anyị, Nọvemba 5th, 2021, bụ nke gị. Anyị jikọtara ohere iji merie njem gaa St. Kitts wee sonye na mmeghari ohuru nke mbụ anyị, Nọvemba 6th, 2021, na asọmpi na-akpọ gị ka ị nyefee foto agbamakwụkwọ gị kacha mma yana okwu 75 na akụkọ dị n'azụ ya. Ohere a na-enye anyị ohere iwelie mmata nke mmata n'etiti ndị di na nwunye na United States niile ma rute eleta onye njem nwere nghọta ọhụụ.
Onye mmeri nke asọmpi ahụ ga-enweta njem maka 2 gaa St. Kitts na November 2021 na ịnọ abalị anọ na Park Hyatt St. Kitts. Dịka akụkụ nke njem ahụ, a ga-akpọ di na nwunye ahụ ka ha sonye na St. Kitts 'nke mbụ Rowwal Rowwal nke ndị nhazi agbamakwụkwọ ama ama na Dreamy Wedding mere.
A ga-agwa ndị tụbara vootu ha ka ha nyefee email ha ma ga-abanye na ntinye aka iji merie 1 nke nchịkọta 10. Ihe ngwugwu onyinye a gụnyere ngwaahịa sitere na St. Kitts.
Asọmpi a ghere oghe nye ndị bi na US, gụnyere DC ndị dị afọ 18 ma ọ bụ karịa ma lụọ di ugbu a. A gha aghaghi ime njem iji gaa mmeghari ohuru nke Group na Saturday, November 6, 2021. A na-emeghe ndị niile na-eme ntuli aka na ịtụ vootu na US, gụnyere DC ndị dị afọ 18 ma ọ bụ karịa.